India inoita COVID-19 bvunzo, yekuisa wega inosungirwa kune vese maBrits
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India inoita COVID-19 bvunzo, yekuisa wega inosungirwa kune vese maBrits
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Icho chitsva chinodiwa chinoratidzika kunge chakaunzwa mukupindura matanho akafanana akaiswa kuzvizvarwa zveIndia neUnited Kingdom.
India yakadaidza danho reBritain rekuti isatore mushonga weIndia weAstraZeneca, unozivikanwa seCovishield, "kusarura".
Vavharirwa veku UK vanosvika muIndia vanoiswa pasi pegumi-zuva rinosungirwa kugara kwavo kwavo.
Kutanga neMuvhuro, vese vanosvika kuUK vanofanirwa kuendesa yakaipa COVID-19 bvunzo yakatorwa yakanyanya maawa makumi manomwe nemaviri vasati vaenda.
Mune zviri pachena tit-for-tat, veIndia Vezvekunze Ministry vashandi nhasi vazivisa kuti vese vekuUK nyika, kusanganisira zvizere vakabaiwa, vanozoiswa pasi pegumi-zuva rinosungirwa kugara voga pavanosvika muIndia.
Icho chitsva chinodiwa chinoratidzika kunge chakaunzwa mukupindura zvakafanana matanho akatemerwa vanhu veIndia neUK.
Chiziviso chitsva chemutemo chinouya mushure mekunge Gurukota rinoona nezvekunze muIndia, Harsh Vardhan Shringla, adaidzira danho reBritain rekuti varege kuziva vhezheni yeIndia. AstraZeneca mushonga, unozivikanwa seCovishield, "kusarura".
Gurukota rakayambira nezvenzira dzekudzosera kana London ikatadza kufunga zvakare.
Kutanga neMuvhuro, vese vanosvika kuBritish - zvisinei nechero nzvimbo yavo yekubaiwa - vachatofanira kupa yakaipa COVID-19 bvunzo yakatorwa maawa anokwana kuita makumi maviri nemaviri vasati vaenda, vanozoedzwa kechipiri pakusvika uye wechitatu mazuva masere gare gare.
Anosungirwa kugara wega kwemazuva gumi achasimbiswawo, sekureva kwemumwe mushandi wekunze.
Hurumende yeBritain yakazivisa mwedzi wapfuura kuti yaizobvumidza vafambi vakazara kubayiwa nhomba kupaza kugara kwavo vega uye kutora bvunzo shoma, asi vakangozobayiwa nhomba pasi pechirongwa cheAmerica, cheBritish kana cheEuropean kana idzo dzakabvumidzwa neboka rehutano rakatenderwa.
Dzinopfuura gumi nemaviri nyika muAsia, iyo Caribbean neMiddle East akazviita kune izvo zvinyorwa, asi IndiaChirongwa hachina kubatanidzwa. Zvakare, hapana chirongwa chemuAfrica chakagamuchirwa.
Vazhinji vamaIndia vakabaiwa jekiseni neakagadzirwa maIndia AstraZeneca pfuti, iyo yakagadzirwa neSerum Institute yeIndia. Vamwe vakagamuchira COVAXIN, mushonga unogadzirwa nekambani yeIndia iyo isiri kushandiswa muBritain.
Kuramba kweBritain kugamuchira zvimwe zvitupa zvekudzivirira kwakakonzera kunetseka kuti zvinogona kuwedzera kuzeza kwechirwere.
Nyika dzakagashira mazana ezviuru emadhiyisi emushonga wekudzivirira weAstraZeneca kubva kuhurumende yeBritain vakasara vachishamisika kuti sei zvirongwa zvavo zvekudzivirira zvisina kukwana mumaziso eanopa.